Islaamka iyo sumcadda
Magaca Allaah kadib, waxaan jeclahay inaan halkan ku xuso erayo kooban, oo ku saabsan sumcadda muslimiinta ee luntay, qaababka ay ku luntay, sida lagu daba qabankaro, iyo waddada ku habboon ee loo qaadayo baadigoobka arintaas.
Sumcaddu: waa karaamada iyo sharafta shay kastaa huwan yahay, waxna ku yahay, haddii ay dhaawacanto ama luntana martabaddiisii hoos u dhacayso. (micne kale oo sumcaddu leedahay hadduu jiro hadda uma jeedno qasadkeennu waa micnahaas karaamada iyo sharafta ah).
Kuma koobna sumcaddu dadka oo kaliya, ee shay kastaa sumcad ayuu leeyahay, sida badeecadaha kala duwan, shirkadaha, xoolaha nool, mabaadida i.w.m. mid kastaa haddii dhaawac gaaro waxay dhimaysaa xiisihii loo qabay, qof masuul ahi hadduu ku tunto anshixii martabaddiisa ku habboonaa waa waayayaa jagadiisa, intaan la cayrinna dammiirkiisaa faraya inuu is casilo, waa hadduu yahay mid damqasho ku jirto.
Carabta iyo sumcadda:
Carabtii asalka hayd waa dad nolosha ku miizaami jiray wax ka duwan waxa ay ku miizaamaan ummadaha kale, carabtu waa dad faan iyo tookh jecel, kuna faani jiray: geesinimmada, deeqsinnimada, aftahammada iw.m. sidaa darted waxaan oran karnaa waxay ahaayeen dad sumcad jecel, dagaalkii Beder markay usoo baxeen, ogaadeenna in hantidoodii Abuu sufyaan waday ay soo badbaadday, dib uma aysan noqon ee waa kuwii yiri : “Wallaahi ma noqonayno ilaa aano Beder ku hilbo qalanno!!, fannaaniintuna noo heesaan!!, carabina ku sheekaysato wacdarradaanu dhignay!!!”.
Sumcadda ay ilaashan jireen mid xaq ah iyo mid baadil ah intaba waa isugu jirtay, nabigeennuna sallalaahu calayhi wasallama wuxuu yiri: waxaa la iisoo saaray inaan dhammaystiro akhlaaqda teeda suubban”. Taasoo sumcaddu qayb ka tahay.
Mabaadida iyo shakhsiyaadka xanbaarsan:
Shaki kuma jiro in mabaadida iyo dadka ku baaqayaa ay lagama maarmaan tahay inay ku tilmaamannaadaan sifooyin dadka wax-garadka ahi aqbali karo, si looga miro dhaliyo ujeeddooyinka laga leeyahay baaqaas.
Halkudhigyada, dadka xanbaarsan, waddoooyinka la qaadayo intuba waa inay turxaan-baxsan yihiin haddii la quuddaraynayo miro wanaagsan iyo guul lagu taami karo.
Nabigeenna iyo Sumcadda (Muruu’ada):
Akhlaaq kasta oo shakhsi lagu ammaano nabigeenna sallallaahu calayhi wasallama qaddar cidna aysan kula loolami karin baa Allaah ka siiyey, wuxuuna ku tilmaamay suuradda Al-qalam “ Adigu waxaad ku sugan tahay Akhlaaq weyni badan”.
Waana arin Allaah uu kusoo barbaariyey tan iyo yaraantiisii, oo bulshadiisa qof maamuus ku leh ayuu ahaa, arintaana magacyo qiimo leh ayuu ku mutaystay sida: Muxammad Al-ammiin.
Hadalkiisa iyo ficilkiisa, la dhaqanka ehelkiisa, deriskiisa, bulshada guud ahaan waxay wada ahaayeen kuwo qiimo iyo qaddarin uu ku muto.
Markii IQRA lagu soo dejiyey ee uu Khadiija ku yiri “Naftayda ayaan u baqay” sida bukhaari ku sugan, waxay tiri “ ma jirto, wallaahi inuusan Allaah ku hoojinayn!! Waxaad tahay mid qaraabada xiriiriya, culayska xanbaara, waxa la waayo keena, martida soora, xaqana garab istaaga”. Carabta miizaankeedu kaas ayuu ahaa, in qofkii dhaqankaas ku sifaysan uusan baylah noqonayn, bulshadana taageero ka waayeyn, maxaa yeelay? Sumcaddiisaa meel sare gaartay.
Haddii nabigu sallalaahu calayhi wasallama isu taagay gudashada waajibka risaalada, waa lagama maarmaan inaan turxaan laga helin, dhaqankii suubbanaana uusan garab marin, si ummadaha kala duwan ee uu wajahayaa aysan u durin, Allaah waa ku garab galay arintaa dheef weyna waa kaga galladaystay, marna cadawgu kagama gar helin sumcad xumo iyo wax kale toona.
Leylintii heerka sarraysay ee nabigu Sallalaahu calayhi wasallama leyliyey saxaabadiisa, qayb weyn ayey kaga jirtay ilaalinta sumcaddu, taasoo saamaynaysay dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha, cibaado iyo dhaqan intaba, waxaan tusaale usoo qaadan karnaa sidii nabigu uga canaan jiray saxaabada inay salaadda dadka ku dheereeyaan, iyo inay zakada marka lasoo uruurinayo xoolaha ishu qabanayso kasoo xulaan, 1w.m
Dhanka xiriirka caalamiga ah waxaan soo qaadan karaa sidii nabigu sallalaahu calayhi wasallama u dhawri jiray heshiisyada la kala dhigto, sida heshiiskii yahuuddii Madiina uu la dhigtay, kii Xudaybiya uu Quraysh la dhigtay, siduu safiirrada u ixtiraami jiray, marna aysan u dhicin in danjire la dilo, i.w.m
Waddadaas nadiifta ah baa saxaabadu ku barbaareen markay hogaanka qabteenna ummadda ku hogaamiyeen, jiilalkii ka danbeeyeyna ku tarbiyeeyeen.
Sumcadda iyo furashooyinkii dalalka:
Kolkii la bilaabay furashada dhulalkii ka baxsanaa jaziiradda carbeed, sida Shaam iyo Ciraaq, Ruum iyo Faaris, iyo dhulalkii durugsanaa ee Bari iyo Galbeedba xigay, muslimiintu waxay ula dhaqmeen dadyawgii dhulalkaa ku dhaqnaa akhlaaq aysan marnaba filanayn!! maankoodana aan kusoo dhicin!! oo dhammaan ay soo jiidaynaysay ummadahaas kale, sida: runta, ammaanada, ballan-oofinta, caddaaladda i.w.m.
Ummuurahaas oo dhani waxay kor u qaadeen sumcaddii muslimiinta waxayna suuro gelisay in ummado kala duwani diintan soo galaan iyagoon cidna ku khasbin.
Dalal badan oo aan dagaal lagu furan baa jira oo shakhsiyaad muslimiin ah oo ganacsato ahi diinta gaarsiiyeen, waxaana u suurogeliyey dhaqankii wanaagsanaa ee ka muuqday, dalalkaas waxaa ka mid ah: Indonesia, Malaysia, Thailand, Cambodia, Philippine, Soomaaliya iyo dalalka dariska la ah, dhammaan dalalkaas waxaa diinta gaarsiiyey ganacsato Yemaniyiin ah, maanta waynu wada aragnaa halka dalalkaasi muslimiinta ka joogaan iyo qiimaha ay ugu fadhiyaan. Taasna wax kale ma suuro gelin aan ahayn dhaqankii wanaagsanaa ee laga arkay ganacsatadaas.
Gaalada kuwooda garsooraa way ka markhaati kaceen in diinteennu aysan ku faafin seef ee ay ku faaftay qancin iyo sumcad wanaagsan, dalalka furashadooda iyo islaamidda dadyawgii laga adkaaday waxay ahayd laba shay oo kala duwan, dalalka gacan ayaa lagu furanayey, balse dadka dhaqanka wanaagsan ayaa lagu hananayey, dalal badan oo masar ka mid tahay, oo quwadaha dunidu ku hardameen marar badan, qolana uma suuroobin inay bedelaan dhaqankii faraacinada, balse muslimiintu waxay ku guuleeysteen xitaa luqaddii inay ka bedelaan, sidoo kale gumaysigii reer yurub kuma guulaysan dalal badan oo uu qabsaday inuu ka beddelo diintooda, dhaqankooda, iyo luqqaddooda, maxaa yeelay quwadahaasi waxay ahaayeen kuwo arxan daran, dhaqankoodana laga dido, quluubtu ay kahanayso magacooda iyo muuqoodaba, balse taariikhdu waxay ka markhaati kacday in muslimiintu sidaa ka beddelnaayeen, dalal badan oo fardahoodu aysan gaarinna sumcaddoodu furtay.
Haddaba aynu iswaydiinnee muslimiinta maanta joogaa sumcad ma leeyihiin? Haddii jawaabtu tahay maya! Maxaa lumiyey?!!
Waxaan dhihi karnaa arrimo badan oo innagu aynu gacmaheenna ku kasbannay ayaa sumcaddeennii wiiqay, halkaana ina dhigay, in dunida saddexaad la inagu tiriyana ina badday!!! Arrimahaas waxaan ka tilmaami karnaa kuwan hoos ku xusan:
Habdhaqanka dad badan oo islaamka si khaldan u fahmay, isla markaana isla qumman, waxay qayb weyn ka tahay sumcad xumada haysata ummadda muslimiinta, maadaama dadkaan dhaqankoodu ka tarjumayo in diintu sidaas qabto, ciddii aan diinta islaamka aqoon u lahaynna ay eedda islaamka dusha uga ridayso.
Arintaan tusaale hadaynu ka bixinno dhanka Caqiidada ah:
Shiicada iyo suufiyada habdhaqankoodu meelo badan ayuu ka shabbahaa kiristanka, hunduuska, buudiga iyo ummado kale, dhaqammadaas oo noqon kara: Durbaanka oo lagu cibaadaysto, is-ruxidda, isgaraacidda shiicada ee 10ka muxarram, nadaafad darrada, ma shaqaystanimada suufiyada, dilka dadyowga aan waxba galabsan oo astaan u noqotay kooxaha takfiirka ah, qarxinta xarumaha halbawlaha u ah nolosha muslimiinta, dilka safiirrada gaalada 1.w.m oo xaaraam ku ah diinteenna balse dad badan la qurux badnaatay.
Waxyaabaha sumcaddeenna xumeeyey waxaa ka mid ah iyadoo aysan ummadda muslimiintu maanta qiimo weyn siinin dadka marjica ummadda u ah, taasoo ay sababo badani qudheeda keeni karaan. Waxaa dhacaysa in dadyow muslimiin ahi arrimo ku tallaabsadaan iyagoon ciddii takhasuska u lahayd aan kala tashan, ha noqoto inaysan kuba soo dhicin ama ha noqoto inay ula-kac u yeelaane, kadibna ay sababto mushkilad lagu dhaleeceeyo diinteenna.
Xamaasaddu meelo ay ka caagan tahay baa jira oo aan loo ogolayn inay boos ku yeelato, waxaana ka mid ah talada iyo goaan gaaridda, iyo qorshaynta ahdaafta iyo maaraynta arrimaha murugaysan.
Waxay wax ka tartaa macrakada gudaheeda iyo hawshii kale ee qorshaheedii lasoo jeexay.
Laablakaca ay ku dhisan yihiin dad badan oo muslimiinta maanta ka mid ahi waxay keentaa natiijooyin aan la mahadin, laablakacaas oo ku laban qaybo badan oo nolosha bulshada ka mid ah, sida: Tacliinta, Dacwada, doorinta munkarka, i.w.m iyadoo maslaxaddii la doonayey mafsaddo ka badani ay timaaddo marar badan oo hadafka la beegsanayo waddadiisa aan la qodax tirin, sidii ku habboonaydna aan looga arrinsan, taasoo sumcad xumo weyn usoo jiidda bulshada muslimka ah meelay joogaanba.
Ummadda muslimiinta ah waa kuwo madax bannaan, maxaa yeelay diin dhammaystiran baa Allaah ku mannaystay, cibaado, akhlaaq, hab-ganacsi, arrimo-bulsho, dhaqanka qoyska, xiriirka caalamiga ah, iw.m ee ummadi ku istaagto dhammaan waa loo dhammaystiray, uma baahna inay cid kale ka dhinbil-qaadato, astaamo madax bannaan baa diinteennu leedahay, ciido madax bannaan baynu leennahay, salafkeennii suubbanaa markay dhaqangeliyeenna ay dunida hogaankeeda muteen, wax marnaba ina qabta ma aha inaynu dadyow kale dabadhilif u noqonno, haddii ay dhacdana sumcad ma yeelan karno, haddii sumcaddeennu luntana cizi iyo sharaf ma haweysan karno.
Madax-bannaanidu ma keenayso inaan ka maaranno wixii kale ee dadyowga kale ina dheeryihiin ee ku saabsan farsamada ama maamul wanaaga.
Dabadhilifnimadu meel walba way inaga gashay, haddii ay tahay manaahijta tacliinta oo dadyow kale aynu kasoo waaridannay, habdhaqanka shakhsiga, midka qoyska, hannaanka dhaqaalaha, garsoorka, siyaasadda, dhanna uma fiyoobin!!! waxaynu noqonnay dad koobbi ka ah hadba ciddii dunida ugu itaal weyn, ama ugu orod badan.
Nabigeenna sallalaahu calayhi wasallama, wuxuu inoo sheegay inaynu noqon doonno daad-xoor, aan wax culays ah lahayn, haybaddeennana laga siibi doono cadowgeenna quluubtooda.
Haddii taasi dhacday waxay ina dhaxalsiisay in shisheeyuhu gacanta inagu hayaan!! Iyagu ina quudiyaan! Dawladdii ay doonaan inoo dhisaan! Tii ay doonaanna ridaan!! Madaxweynihii ay rabaan keenaan!!! Kii ay nacaanna siibaan!!! Maanta nolosha muslimiintu dhannaba ugama fiyooba gacmo shisheeye, dal la dhihi karo waa madaxbannaan yahayna ma jiro!! Haba la is dhaamo, dadyow la hagaana ma noqon karaan kuwo sumcad leh.
qarniyadii muslimiintu dunida hogaaminayeen waxaa bulshada ku badnayn xilkasnimada iyo dareenka masuuliyadda, qof kastaa waxa ku aaddan waa isu xilqaamayey, duleelka ku beeganna waa buuxinayey, taasoo sababtay sumcadda muslimiintu inay kor u kacdo.
Balse markii taa la waayey, anaaniyadu badatay, xilku uusan cidna dhibin, iskaba daa wixii umadda ka dhexeeyeye tii gaarka ahayd la dayacay, waxay ina dhaxalsiisay inaan noqonno ummad la fududaysto, wax qiimo ah aan lahayn, maxaa yeelay qofaan isagu isqiimayn cidna ma qaddarinayso.
Sidee usoo celin karnaa sumcaddeennii luntay?!
Baroori waxba ma tarto, guri dumayna ma toosiso, qof dhintayna masoo noolayso, waxaa inala gudboon inaynu dib u amaamudno sidaynu u toosin lahayn sumcaddeenna dhulka taalla, taasina waxay ku suuro-geli kartaa laba shay oo mid saddexeeya aan lahayn: 1- Sababaha sumcadda keena oo aynu ku sifowno. 2- Inagoo ka fogaanna wixii sababahaa inay shaqeeyaan hor istaagi kara.
Waxyaabihii todobada ahaa ee aynu ku sheegnay cadawga sumcadda oo meesha ka baxa, isla mar ahaantaana lidkood booskooda la dhigaa waa yagleelid dhammaystiran oo hadafkeennii aynuu siinnay.
Si toosan oo shareecada loo fahmo, iyadoo la qabsanayo fahamkii salafkii suubbanaa, tallaabo kastoo la qaadayana sidaa lagu jaangooyo, alleylehe waddo wanaagsan oo sumcad wanaag horseedi karta dheh.
Tallaabo kastoo la qaadayo oo looga danbeeyo dadka marjica u ah ee takhasuska u leh, taladoodana la iftiinsado iyadana wadiiqadii xalka iga dheh.
Laab-lakaca oo lagu xakameeyo sharciga iyo caqliga iyadana ifafaalo guuleed dheh!!
Daba-dhilifnimada oo laga sarriigto, qofkii laga uriyana la weel-duwo iyadana dadnimo dheh!!
Shisheeyaha oo la iska shisheysiiyo siduu yahayna loola dhaqmo iyadana raganimo dheh.
Dareenka masuuliyadda oo bulshada ku dhex baahda astaan dawladnimo dheh!!!
Intaas baan mawduucan gudaha ballaaran ka yara iftiiminayaa, wixii aan saxay waa tawfiiq rabbi, wixii aan khaldayna waa ilduuf aadane.
Mohamed Osman Aadam (Abuuxaazim).